ingane ezincane iba yilungu layo main ngosuku lokuqala kwalo umndeni. Kodwa ngenxa uhlelo ampofu mzimba, yena kuncike izifo ezihlukahlukene. Noma yimuphi umntwana thimula - bese umama-obaba, ogogo nomkhulu sukela him nge kweqembu izidakamizwa, amakhambi kwamakhambi. Kodwa lokho ngokuvamile kungaphazamisa abangaqinile, "Chief?" Yiqiniso, lwesisu. Futhi kukhona izizathu lokhu eziningi: ukudla okungavamile, ubuthi Rotavirus.
Ngesikhathi ukubonakaliswa yokuqala yesifo sohudo, umntwana kufanele banikezwe izidakamizwa "Smecta" izingane. Yokusetshenziswa ulula futhi ishaya emhloleni, imithi ingasetshenziswa ngaphandle udokotela. Uma ingane ngokungazelelwe baqala sohudo izidakamizwa "Smecta" - usizo lokuqala. Kodwa-ke qiniseka ukuthi ushayele udokotela!
Uhudo ngokuvamile is phetho bacterium aqala ukuba ngenkuthalo ziyanda emathunjini amancane, okubangela nesifo futhi sezinyawo sezingubo. Ngaphezu kwalokho, imbangela wokugaya ukudla iziyaluyalu kungaba isibindi ukungasebenzi.
imiphumela kwamakhemikhali emathunjini (ubuthi) nakho kungaba imbangela sohudo ezinganeni. Kunoma isiphi isimo, ukusiza izidakamizwa "Smecta" izingane. Iziyalezo yokusetshenziswa uthi kungenzeka wanikeza ngisho izingane ezingaphansi konyaka. Kuyinto imithi ngokuphelele ephephile odabuka yemvelo, okungasekelwe ugxile emathunjini, osebenza njengokuvimbelayo uzibuthe ukuze izitshalo pathogenic. Futhi, izidakamizwa kunomphumela ukuzivikela, esiza ekuthobeni nasekwelapheni ukuvikela wacasuka mucosa emathunjini, okudambisa ubuhlungu, futhi ngaleyo ndlela kunomthelela ukululama okusheshayo.
Ngenxa odabuka yemvelo kusho isicelo "Smecta" izingane zalesi izidakamizwa iphephile ngokuphelele. Ezinganeni ezingaphezu kuka-2 ubudala ezifuywa izikhwama 2-3 ngosuku ngamanzi afudumele. Izingane ezingaphansi imithi unyaka owodwa ziyoncibilika amanzi batheleka ibhodlela. Ungakwazi ukwengeza ikhambi lelungiselelwe kule ukudla noma isiphuzo.
Abazali abaningi bayabuza: "Kungenzeka yini ukuba anikeze izidakamizwa" Smecta Awaqukathi imiphi imikhawulo "izingane ezingaphansi konyaka?". Izinga Daily nawosana - 1 isikhwama semali, okumele abe ihlukaniswe 2-3 Ukweqiwa.
Ingozi ukweqisa izidakamizwa "Smecta" izidakamizwa izingane? Yokusetshenziswa kuvimbela ukubonakala ezimweni ezinjalo ukuqunjelwa esimeme, ngakho kufanele abale kahle umthamo ngokobudala nesineke. Eminye imiphumela emibi e ithuluzi phakathi ucwaningo aye atholakala.
Ukuba khona izidakamizwa e iKhabhinethi ikhaya imithi kuyasiza abadala: izidakamizwa "Smecta" usisindise imiphumela emibi Hangover, futhi ngokushesha okudambisa ubuhlungu ngesikhathi exacerbation of kolwelwesi. Kuyinto umsizi enemisebenzi ngempela.
Lapho ulungiselela "Smecta" isixazululo ukuze kufundiswe izingane ku isicelo kumele babe khona. Qaphela lapho ekhetha umthamo, futhi ungakhohlwa ukuthi powder kufanele ngobumnene engeza amanzi afudumele, i-eshukumisayo kancane kuze nokonakala ephelele izidakamizwa. Wamukele Akudingeki ngokushesha ngemva nokulungiselela.
Envelope-transformer izinsana kumelwe!
Simulator "Vander Kor Smart": izibuyekezo zamakhasimende, luhlelo lwekucecesha, amanani